ဝီကီပီးဒီးယား:နိဒါန်း/မော်ကွန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
နိဒါန်း ပြင်​ဆင်​ရေးပိုလေ့လာ ဝီကီပီးဒီးယားကိုစူးစမ်း သင်ခန်းစာများ
မ္ရန္‌မာဘာသာ ၀ီကီပီးဒီးယမ္ဟး ္ရကိုဆိုပာ၏‌ ။ (Unicode 4.0 encoding)
မြန်မာစာဝီကီပီးဒီးယားမှကြိုဆိုပါ၏။ ။ (Unicode 5.1 encoding)
မြန်မာစာဝီကီပီးဒီးယားမှကြိုဆိုပါ၏။ ။ (Unicode 5.1 encoding with zwsp)
Welcome to the Myanmar Wikipedia in the Burmese Language! If you see squares or question marks on this page, you might need Burmese fonts. They can be downloaded from the following website http://www.myanmarnlp.net.mm/opentype.htm , http://scripts.sil.org/Padauk More information on the Burmese script can be found here http://en.wikipedia.org/wiki/Burmese_script
If you can speak, read and write in Myanmar/Burmese Language, or are interested in this language, please contribute what you can.
ဝီကီပီးဒီးယားတွင် တစ်ခုတည်းသော ယူနီကုဒ်အမျိုးအစားကို အပြည့်အဝ၊ မှန်မှန်ကန်ကန်၊ တစ်ချက်မှ သွေဖီခြင်းမရှိသော - မြန်မာသရီး ၊ ပိတောက် ၊ ပုရပိုဒ်စံ ဖောင့်များကို သုံးပါသည်။ ၄င်းတို့သည် အတူတူဖြစ်ပါသည် ။ သင်ရဲ့ကူညီမှုကို ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (If your browser is not displaying correctly to above Burmese characters , please visit this website -http://thanlwinsoft.org - to see your browser's compliance to Unicode 5.1 and relevant font.
At the moment, there are ၁၀၃၄၁၉ articles being standardized to comply with Unicode 5.1 encoding. There are some articles that need to be converted to latest Unicode 5.1 encoding from old Unicode encoding standards, found at Category:Pages not in Unicode 5.1. You are requested to correct, add and convert to latest Unicode 5.1 encoding whatever necessaries .
Your contributions are highly-appreciated in advance.
For more information about the font you can go to Wikipedia:Font. You can discuss it at Wikipedia_talk:Font.
သင့်အားအမြဲကြိုဆိုပါ၏။ You are always WELCOME
PS: If you are looking for Malay language Wikipedia, (since the country code of Malaysia is my but the language code for Malay is ms) it is available at Malay Wikipedia Main Page.
နောက် -ပြင်​ဆင်​ရေးပိုလေ့လာ →
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝီကီပီးဒီးယား:နိဒါန်း/မော်ကွန်း&oldid=381981" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇၊ ၁၄:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။